"Waxaan U Baahanahay Inaan Gurigayga Tago, Xaaskaygii Ayaa I Sugaysa e" - Kevin de Bruyne Oo Qalbi-Jabkii Guul-darrada Iyo Su'aalihii Wariyeyaashu Hafiyeen - Gool24.Net
“Waxaan U Baahanahay Inaan Gurigayga Tago, Xaaskaygii Ayaa I Sugaysa e” – Kevin de Bruyne Oo Qalbi-Jabkii Guul-darrada Iyo Su’aalihii Wariyeyaashu Hafiyeen
Xiddiga reer Belgium ee Kevin de Bruyne ayaa qirtay niyad-jabkiisa markii ay Manchester City kasoo hadhay tartanka Champions League, waxaanu sheegay inuu u baahan yahay inuu si degdeg ah ugu laabto gurigiisii oo ay ku sugayso xaaskiisa oo xaamilo ah.
Man City ayaa guul-darro 3-1 ah loogu soo xambaarisay magaalada Lisbon ee waddanka Portugal waxaanay ku hadheen wareegga siddeedda ee tartanka Champions League, halka Lyon oo si lama filaan ah u karbaashtay ay iska xaadirisay semi-finalka oo ay Bayern Munich kula ballansan tahay.
Maxwel Cornet iyo Moussa Dembele ayaa goolasha ka dhaliyey Man City, halka uu De Bruyne goolka madiga ah saxeexya.
Markii ay ciyaartu dhamaatay ayay warbaahintu waraysi la yeelatay De Bruyne waxaanu sheegay inuu u baahan yahay inuu si degdeg ah gurigiisa ugu laabto, isaga oo yidhi: “Waxaan u baahanahay inaan guriga tago, xaaskayga ayaana filaysa. Waxaan u baahanahay wax aan yoolkayga saaro.
“Waa sannad kale iyo isla natiijadii. Qaybtii hore ciyaar nagu filan maanaan la iman. Qaybtii labaad, waxay wanaagsan ayaanu u ciyaarnay. Waxaanu kusoo laabanay 1-1, waxaananu helnay fursado dhawr ah. Kaddib waxay noqotay 2-1, haddana 3-1.”
Kevin de Bruyne waxa uu ku dooday in Lyon aanay la imanin fursado laakiin ay haddana badiyeen, waxaanu yidhi: “Lyon dhab ahaantii fursado may abuurin, laakiin waxaanu u baahanahay inaannu wax ka barano.”
Si kastaba, Manchester City ayaa sannadkan faro madhan ah, waxaana kaliya ay ku guuleysteen Carabao Cup, iyadoo ay Liverpool ka qaadday horyaalka Premier League, halka FA Cup ay Arsenal kusoo garaacday Semi-finalkii.
Cabdulaahi shiune says:
Wuu saxanyahay Lyon nasiibka ayaa uhiiliyay fursado lama imaan waxwalbana qadar bay ahaa yeen